Ọrịa Hemorrhagic na ọrịa akwara
Ọrịa Hemorrhagic na ọrịa mkpọnaka na-akpọ nnukwu ọrịa ịrịa ọrịa na-akpata, bụ nke e ji ọtụtụ mgbaàmà mara:
imebi ihe nke arịa ọbara;
mmepe nke ọrịa thrombohemorrhagic.
A na-akpọkwa ọrịa ahụ ọrịa fever vasride nke dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ahụhụ hemorrhagic nke Manchurian, ọrịa na-akpata ọrịa Scandinavian, nephro-nephritis hemorrhagic na ihe ndị ọzọ. Umu ogugu nke oria a bu eziokwu bu na omumu omumu omumu omumu nke mere ka ha nwee ike ibido ihe ndi ozo bu ndi mere na Far East nke Russia na 1938-1940.
Ihe kpatara ọrịa
Na Europe, ndị na-ahụ maka ọrịa na ndị na-ahụ maka ọrịa ahụ bụ eriri uhie, oghere ugbo, uhie na-acha uhie uhie na eriri ụlọ. A na-ebute nje ọrịa hemorrhagic site na òké nye ndị mmadụ site na tractal tract, ya bụ, site na ikuku-ntụ. Ụzọ nke abụọ nke ịnyefe nje ahụ bụ ịkpọtụrụ onye na-ebu ụgbọelu ma ọ bụ ihe ndị dị na gburugburu ebe obibi, dịka ọmụmaatụ: ahịhịa, hay, brushwood na ihe ndị yiri ya.
E nwekwara ihe ize ndụ nke ikwe ọrịa fever hemorrhagic mgbe ị na-eri ihe oriri ndị a na-emetụbeghị ọkụ, yana nke ndị emerụworo na ndị na-ebu.
Ihe dị mkpa bụ eziokwu ahụ na enweghị ike ibunye nje ahụ site na mmadụ gaa na mmadụ, ya mere, mgbe ị na-akpọ onye ọrịa ahụ, ọ dịghị mkpa iji mgbatị gau na ihe nchedo ndị ọzọ, na-atụ egwu ihe ọjọọ na-akpata n'ụdị ọrịa hemorrhagic.
Isi ihe mgbaàmà nke ọrịa fever hemorrhagic
Oge nkwụsị na-adị na nkezi 21-25 ụbọchị, n'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike ịdị iche site na ụbọchị 7 ruo 46. Ụbọchị ole na ole tupu mmalite nke mgbaàmà mbụ nke ọdịdị ahụ ọkụ ọbara ọbara, onye ọrịa nwere ike ịnweta ọrịa, adịghị ike na ihe ndị ọzọ prodromal phenomena. Ụbọchị atọ mbụ nke ngosipụta nke ọrịa ahụ hemorrhagic na onye ọrịa nwere nnukwu okpomọkụ (38-40 Celsius C), nke nwekwara ike ịbịakwute ya na ụfụ (n'ọnọdụ ụfọdụ), isi ọwụwa, adịghị ike na akọrọ . Na oge mbụ, onye ọrịa ahụ na - enweta ọrịa "hood" - hyperemia nke akpụkpọ ihu, olu na obi dị n'elu. Ọ bụ n'ihi mmeri nke akpụkpọ anụ ndị a ka akara ahụ natara aha dị otú ahụ.
Na oge febrile, nke na-eme mgbe mbụ, ọnọdụ okpomọkụ nke nje ahụ adịghị ebelata, ebe ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ. Ọtụtụ mgbe, site na nke abụọ ruo n'ụbọchị nke iri na otu nke ọrịa onye ọrịa, ihe mgbu dị na ala dị ala na-enwe nsogbu. Ọ bụrụ na ha anaghị abịa mgbe ụbọchị ise nke ọrịa ahụ gasịrị, dọkịta nwere ihe niile mere ị ga-eji nwee obi abụọ banyere nchoputa. Ọtụtụ mgbe ụdị mgbu ahụ pụta, vomiting na - aga n'ihu, nke na - eso mgbu na - abata n'afọ. Mgbalị siri ike ghara ịdabere n'ihe oriri e mere ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ya mere ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ya onwe gị. Mgbe nyocha, onye dọkịta ahụ nwere ike ịhụ akpụkpọ anụ na ihu na n'olu, conjunctiva na ụfụ nke nkuchianya elu. Ihe mgbaàmà ndia nile emesiri gosi onodu ogugu.
Ọzọkwa, na ụfọdụ ndị ọrịa, mgbaàmà siri ike nke HFRS nwere ike ịmalite:
okpukpu ụba nke arịa ọbara;
ọdịdị nke petechiae;
ọnyá na saịtị ogbugba;
ọnyá na sclera;
ọbara ọgbụgba .
A na - achọta nsogbu dị otú ahụ na pasent 15 nke ndị oria ahụ.
Ihe kacha pụta ìhè nke ọrịa hemorrhagic bụ mmebi akụrụ, nke a na-ahụ na ndị ọrịa nile. A na - ahụ mgbaàmà a site n'enyemaka nke ihu na ihu, ihu ọma dị na nyocha nke mgbaàmà Pasternatsky na pasty nke nku anya.
N'ime oge mmebi ahụ, ọrịa onye ọrịa ahụ dị mma, mana azotemia na-amalite. Onye na-arịa ọrịa ahụ na-agụ ya mgbe niile, na ịgba agbọ anaghị akwụsị. Ihe niile a na-esonyere gị na ị na-ejide onwe gị, isi ọwụwa na ngwa ngwa.
Site na nke 9 ruo n'ụbọchị nke 13 nke ọrịa ahụ, nkwụsị na-akwụsị, isi ọwụwa ga-apụkwa, ma adịghị ike na nkụ na ọnụ nọgidere. Onye ọrịa ahụ akwụsịghị inwe nsogbu site na mgbu na ala ala na afọ, n'ihi nke agụụ ahụ na-alaghachi. Nke nta nke nta site na 20-25 ụbọchị mgbaàmà ahụ na-ebelata, oge mgbake ahụ amalitekwara.
Ogbugbu na - emekarị ka ụmụ nwanyị - kpatara
Hematologist - onye ka ọ bụ, gịnị ka ọ na-eme nakwa mgbe ọ chọrọ dọkịta?
Cheshutsya anya - ihe ị ga - eme?
Gentamicin - injections
Mgbu egbu egbu - enyemaka mbụ
Ịgbapu ụkwụ - ọgwụgwọ
Ude si bruises
Pediculosis - oge nkwụsị
Igwe ihu igwe nke anya
Kedu anya m dị mma - otu ụbọchị ma ọ bụ izu abụọ?
Ihe na-akpata extracorporeal
Ọrịa nke splin - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Chemotherapy maka Ọrịa ara
Kedu ihe a ga-eme site na disks?
Nri gel na nkpuru
Polina Gagarina - Eurovision Song Contest 2015 - uwe
Ọrịa na ọgwụgwọ na-adịghị mma
Ihe ngosi nchara mara mma - 40 foto nke ihe kachasị mma nke oge ọhụrụ
Kedu ihe bụ talent na ọgụgụ isi na nkà mmụta mmekọrịta ụmụ mmadụ?
Kedu ka esi eme onye nnunu nnunu?
Nri nri maka ndị na-enye nwa ara - Ezi ntụziaka
Ụzọ egwu - ụdị ndị mara mma na nke mbụ maka ụmụ agbọghọ
Echiche nke mma nwanyi na obodo iri abụọ na abụọ nke ụwa
Ụlọ ụlọ na-abaghị uru
Malite site na sauerkraut
Kendall Jenner kere echiche ya na smartphones na selfies
Egwu nke owu ọmụma
Ngwaahịa bara uru maka afo
Mgbanwe inferction nke myocardial transmural
Esi esi nri pangasius fillets?
Na-atụgharị uche n'aha nwoke
25 foto jọgburu onwe ya ndị ezigbo mmadụ
Prince William kwupụtara ihe ndị na-akpali mmasị banyere ihe omume ntụrụndụ nke ụmụ ya